'Masigunyazwe nesithembu sesifazane' | News24
'Masigunyazwe nesithembu sesifazane'
Durban - Uma njengesizwe namabandla ezenkolo sikwazi ukwamukela ubutabane ngezinhliziyo ezimhlophe bekuyini ukugunyazwa kwesithembu sabesifazane.
Ngikhuluma njengengqapheli ezigcobile, umhlaziyi ozimele ngoba ngiyabona ukuthi lelizwe likhungethwe ubuxoki.
Uma kungukuthi izitabane zazichithwa yinkolo nawumphakathi kwaya ngokuya zagcina sezamukelekile, yini pho ingabuyekezwa le ndaba yesithembu nje sonke.
Lento ivuswa yizigameko zokubhadanywa kwabesifazane beqome abantu ababili.
Ngibuka abantu abaningi bebabaza indaba kaKarabo kulomdlalo wakuTV, lapho esenkingeni ‘yesithembu’ nokungajwayelekile ukuthi abantu besifazane bavume ukuthi bathanda abantu ababili nkathinye.
Lento yokuthandana nabantu ababili ngesikhathi esisodwa ivame ukuqhathaniswa nomona nokuba ngugombela kwesakhe, kodwa akekho oke azinike ithuba lokuzibuza ukuthi kwenziwe njani uma ngampela uthanda abantu ababili.
Funda nalolu daba: 'Akukho sici ngamazwi eMbube'
Izwe selishintshile, sesaphila kwingxubevange eyenza konke kubukeke kwamukelekile nje emhlabeni. NgokwesiNtu isithembu sigunyaza owesilisa ukuthi angathatha amakhosikazi amabili nangaphezulu.
Kodwa imfundiso yasentshonalanga iyashayisana nalomkhuba ngezizathu ezihlukene kubalwa nokwanda kwezifo zocansi.
Mabakhululwe osisi, ozizwayo ukuthi uthanda isithembu kumele azilungisele isithembu sakhe bese kuthi abantu ababukelayo nomphakathi bahlale phansi banake izindaba zabo baphume ezindabeni zabantu abasesithenjini.
Ngiloku ngicaphune ubutabane nje ngomhlahlandlela wesithembu ngoba yibona obebuthathwa njengechilo, buyinhlamba njengaso isithembu sesifazane.